Zvikonzero nei isu tisingade isina chitubu chematuru | Rayson
Zvikonzero nei isu tisingade isina chitubu chematuru
Kunyanya, maguta makuru ekukura ari kutarisana nematambudziko nezvivakwa zvakachena. Dambudziko iri rakanyatsoenderana negirazi chimiro uye matambudziko emagariro, nekuti vanhu vazhinji vanofa paunenge uchichenesa zvivakwa gore rega rega. Panyaya yehupenyu hwehupenyu hwechimiro kana chivakwa, kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa kune chikamu chekuparadzirwa. Iyo girazi chimiro inogona kuve yakawanda eco-hushamwari uye ane mutoro.
Dunhu rekuvhiyiwa pakati pebhatiri uye jenareta rinowedzera voltage yemotokari pamusoro pebhatiri voltage. Iyo Batter Pack ichiri kupa 21 kw, asi idiki (zvinoreva kuti vanogadzira yakakwira simba density) yakaderera yekugadzira mari. Chimwe chezvinangwa zvePrus's Lossampines (yakavezwa seSuleev neCalifornia Air Socus Comission (